Myanmar IT Dictionary: Icon
ကွန်ပျုတာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ရုပ်ပုံငယ်လေးတွေကို အိုင်ကွန်(Icon) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ မြန်မာစာ အဖွဲ့က အဘိဓါန်မှာတော့ ကွန်ပျုတာ ပရိုဂရမ် သင်္ကေတ လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ထား ပါတယ်... အောက်မှာ နမူနာ ပုံလေးနဲ့ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရမှာပါ..
တကယ်တမ်း ကတော့ အိုင်ကွန် ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ အလုပ် လုပ်ဆောင်ပုံ တွေက အလွန် ကျယ်ဝန်းပါတယ်။
ကွန်ပျုတာ ဖန်သား မျက်နှာပြင် ပေါ်ရှိ အိုင်ကွန်တစ်ခုဟာ-
-ပရိုဂရမ် (Program) တစ်ခု၊ ဖိုင်တစ်ခု၊ ဖိုင်များ ထားရှိ သိမ်းဆည်းရာ နေရာ (Folder) တစ်ခု၊ အမိန့်ပေးချက် (Command) တစ်ခု သို့မဟုတ် အင်တာနက် စာမျက်နှာ တစ်ခု စသည်ကို ကိုယ်စားပြု ဖေါ်ပြထားသော ရုပ်ပုံငယ်..
-အရာဝတ္ထုတစ်ခု ၊ စကားလုံးတစ်လုံး သို့မဟုတ် အယူအဆ တစ်ခုကို ပုံဖော်ပြသခြင်း
-လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သည့် အလုပ် တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြချက် စသည် အားဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
-အိုင်ကွန်လေးတွေကို တည်ရှိနေတဲ့ နေရာအပေါ် လိုက်ပြီး မောက်စ် (Mouse) နဲ့ တစ်ချက် နှိပ်တာ၊ နှစ်ချက် အမြန်နှိပ်တာတွေ လုပ်တာဟာ သူတို့ လုပ်ပေးရမယ့် အလုပ်ကို ခိုင်းစေ လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
*.ကွန်ပျုတာနှင့် အသုံးပြုသူတို့ကြား ရုပ်ပုံများဖြင့် ကြားခံဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်သော စနစ် (GUI)(ဂူအီ - Gooey ဟု အသံထွက် ပါသည်) မှာ အိုင်ကွန်တွေဟာ အဓိက ကျတဲ့ အရာများအနက် တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်လာပါတယ်...
*.အခုဆိုရင် ကွန်ပျုတာတစ်ခုတည်းမှာတောင် မဟုတ်တော့ပါဘူး ... GUI စနစ်ကို အသုံးချလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းတိုင်း၊ နေရာတိုင်းမှာ (လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ကင်မရာ၊ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး စသည်) တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေပါပြီ..
*.ဒီစနစ်ကို စတင်သုတေသနပြု အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့တာကတော့ Xerox ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ Palo Alto သုတေသန အဖွဲ့သားတွေဖြစ်ပြီး ... ၁၉၇၀ နှစ်များ ကနေ စတင်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ် ထဲကို ရောက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်...
*.စာမဖတ်တတ်သေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေတောင် ကွန်ပျုတာနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ၊ အခြားသော အီလက်ထရောနစ် မီဒီယာတွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ် အသုံးချနိုင် လာခဲ့တာဟာ အိုင်ကွန်တွေရှိနေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လည်း တစ်ချက် အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်... "မြင်ရခြင်းကြောင့် ယုံကြည်တယ်" (Seeing is Believing) ဆိုသလိုပါပဲ ထိတွေ့နေကြ မြင်တွေ့နေကြ အရာတစ်ခုကို ဘာမှ မသိ နားမလည် သေးပေမယ့် သိရှိ နားလည် နေသလို အသုံးချ နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်...
*. တကယ်လို့များ GUI စနစ်နဲ့ အိုင်ကွန်တွေကို အသုံးပြုတဲ့ ကွန်ပျုတာ စနစ်တွေသာ ပေါ်ထွက်မလာခဲ့ရင် ဒီနေ့ လူတိုင်းသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျုတာတွေဟာ ပေါ်စဦး ကာလကလို စာကြောင်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကလေးတွေ မဆိုထားနဲ့ အရွယ်ရောက်သူတွေတောင် အင်္ဂလိပ်စာ အခက်အခဲ၊ ကွန်ပျုတာ ဝေါဟာရဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကြောင့် လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီစွာ အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ် ပါဘူး...
*. အိုင်ကွန်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျုတာဖန်သားပြင် မြင်ကွင်းရဲ့ အခြေအနေ အပေါ်မူတည်ပြီး 16x16 pixel ကနေ၊ 128x128 pixel, 512x512 pixel အရွယ်အစား အထိ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကြိုက် အရွယ်အစားများ အဖြစ် ရရှိအောင် ပြင်ဆင်နိုင်စေဖို့လည်း စက်မောင်းနှင်မှုစနစ် (OS) တွေက ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်...
*. အိုင်ကွန်တွေကို ကွန်ပျုတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်က Desktop၊ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများမှာ ပါဝင်နေတဲ့ Toolbar များနဲ့ Menu များမှာ အများအပြား တွေ့နိုင်ပါတယ်...
*. အိုင်ကွန်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကွဲပြားခြားနား ကြလေ့ရှိပြီး မှတ်မိဖို့လည်း အလွန်လွယ်ကူအောင် အသုံးပြုရလွယ်အောင် ဖန်တီးပေးထားကြပါတယ်...
*. အိုင်ကွန်တွေရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ နောက်ထပ် အချက်တစ်ခုကတော့ သူတို့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အလုပ်၊ ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ ထိထိမိမိ ဖော်ပြ ပေးထား နိုင်စွမ်းရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်..
*. ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ကူးယူထားတဲ့ အရာ တစ်ခုခုကို ဖြတ်ထုတ် (Cut) နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ အိုင်ကွန်မှာ "ကတ်ကျေး" ပုံနဲ့ ဖော်ပြ ထားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်... ဆော့ဖ်ဝဲ အမျိုးမျိုးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ "ကတ်ကျေး" တွေရဲ့ အပြင်အဆင် တွေနဲ့ အလှအပတွေသာ ပြောင်းလဲ သွားတာ ဖြစ်ပေမယ့် "ဖြတ်ထုတ်ပေးမယ်" ဆိုတဲ့ ကတ်ကျေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ မူလပုံပန်းကတော့ မပြောင်းလဲပါဘူး...
*. အလားတူပဲ Windows OS ကိုအသုံးပြုတဲ့ ကွန်ပျုတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ အမြဲ တွေ့မြင်နေရတဲ့ အိုင်ကွန်တွေဖြစ်တဲ့ My Computer, My Network Places စတဲ့ အိုင်ကွန်တွေ ဆိုရင်လည်း Windows 95 ကနေ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ စနစ်တွေအထိ ဖော်ပြထားတဲ့ အမည်၊ ဖော်ပြထားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေသာ အနည်းနဲ့ အများပြောင်းလဲ သွားကြတာ ဖြစ်ပေမယ့် ဆိုလိုရင်းဖြစ်တဲ့ My Computer (ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျုတာနဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေ အားလုံး ကြည့်လို့ရတဲ့ နေရာ)၊ My Network Places (မိမိကွန်ပျုတာ နဲ့ ကွန်ရက် ဆက်သွယ်ထားတဲ့ နေရာများ) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကတော့ ပြောင်းလဲမသွားပါဘူး...
*. အလားတူပဲ Recycle Bin လို အိုင်ကွန်မျိုးဆိုရင် Microsoft Windows, Apple Macintosh စတဲ့ OS တွေမှာ အမှိုက်ပုံး ပုံစံလေးနဲ့ ဖော်ပြထားပြီး အသုံးပြုနေခဲ့တာ တွေ့ကြရမှာပါ... ပုံစံတွေ၊ အခေါ်တွေနဲ့ အရောင် အဆင်းတွေ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေပေမယ့် အမှိုက်ပုံး အသွင်ကတော့ မြင်တာနဲ့ သိသာလွယ်ပြီး... ပိုကောင်းအောင် တိုးချဲ့ ထည့်သွင်း လာတဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ ရှိလာပေမယ့် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ "မလိုအပ်တော့ဘူး ထင်ရတဲ့ အရာတွေကို ခဏ ထည့်သွင်း ထားရှိလို့ရတဲ့ နေရာ" ကတော့ မပြောင်းလဲခဲ့ ပါဘူး။
*. ဒိထက် ပိုတိုးချဲ့ စဉ်းစားကြည့်ကြမယ် ဆိုရင်- အိမ်တွေရုံးတွေမှာ ရှိနေတဲ့ အမှိုက်ပုံးတွေလိုဘဲ ဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ် ... မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ အရာတွေကို ထည့်လိုက်လို့ ရပြီး၊ မှားထည့် မိရင်လည်း (တကယ် မဖျက်ဆီး ရသေးဘူး ၊ အိမ်တွေက အမှိုက်ပုံးတွေမှာ ဆိုရင် တကယ်မသွန်၊ မစွန့် ရသေးဘူး ဆိုရင်) ပြန်ယူလို့ ရနိုင်တယ်- ဆိုတဲ့ အချက်တွေ တူညီနေတာ တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
*. နောက်ထပ် အလားတူ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကို အခြား အခြားသော အိုင်ကွန်တွေနဲ့ ပြင်ပမှာ လူသားတွေ နေ့စဉ် အသုံးပြု နေကြတဲ့ အသွင်တူ ပစ္စည်းလေးတွေ အချင်းချင်း နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရင် လည်း အများကြီး တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်...
*. ကွန်ပျုတာဆော့ဖ်ဝဲ တီထွင်နေသူတွေဟာ လူသားတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀နဲ့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေရ တာတွေကို ပိုမိုလွယ်ကူ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူတွေ နေ့စဉ်ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေကြရတဲ့ အရာတွေနဲ့ပဲ ကွန်ပျုတာမှာ မြင်နေရတဲ့ အရာတွေကို ပုံဖော်ပြသ ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်... ဒါကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင် အိုင်ကွန်တစ်ခုကို မြင်တာနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်လို့ ရပါတယ်...
-define:icon, program, GUI, pixel & Toolbar in Google Search
ဆွေးနွေး အကြံပြုချက်များ အားလုံးနှင့် ထပ်မံ ဖြည့်စွက်လိုသော အချက် အလက်များကို Comment မှတဆင့် ထည့်သွင်း ဆွေးနွေး ပေးသွား နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျား...
Labels: GUI, Icon